mairie-antananarivo – Boriboritany voalohany: Fanadiovana « kifafa andiany faha 4 »
Boriboritany voalohany: Fanadiovana « kifafa andiany faha 4 »
auteur 27 martsa 2017 Commentaires fermés
Notontosaina ny Alatsinainy 27 Martsa 2017 ny « Kifafa andian’ny faha 4 » izay niarahana tamin’ny mpiasan’ny Boriboritany Voalohany sy ny mpamafa lalana izay notarihan’ny Lefitra voalohany Lehiben’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa RAKOTOMALALA Hery, « Tsena Be » Isotry izay notarihan’ny Delegeny Andriamatoa RANDRIAMANANTENA William, ireo Fokontany maromaro izay mandrafitra ny Boriboritany Voalohany, ary ny tena nampiavaka azy dia ny fandraisan’ny Kiadin’i Madagasikara anjara.
Ny famafana faobe dia nanomboka teny amin’ny Tunel Ambanidia, nihazo an’ Ambohijatovo nitohy teny Mandrosoa sy Saint Michel Amparibe ary nifarana teny Anosy. Nahatratra 500 teo ho eo ireo mpandray anjara ary ny tena tanjona tamin’ity Kifafa andiany faha 4 ity dia ny fanentanana ny mponina mba handraisan’izy ireo anjara amin’ny fanadiovana ny tanàna.
Araka ny nambaran’Andriamatoa RAKOTOMALALA Hery dia : « mila tosika sy fandraisana anjara avy amin’ny vahoaka ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo, ary ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra dia tsy reraka amin’ny fanentanana sy fandresena lahatra ny vahoaka mahakasika ny fahadiovana ». Araka ny nambaran’ity farany ity ihany dia anisan’ny ezaka nataon’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra koa izao mba ho fanomanana ny fankalazana ny fahatsiarovana ny tolom-pahafahana 29 Mars 1947.
Mbola hitohy izao hetsika izao amin’ny alalan’ny kifafa andiany faha-5 ary ny tanjona amin’ny manaraka dia ny mba hirotsahan’ny mponin’Antananarivo rehetra hanadio ny tanàna.
Famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ny filankevitra monisipaly ny CUA
Fanadiovana ny farihin’Anosy
Boriboritany faha-2 : Nodiovina ny lakandrano tao Tsiadana – Ampasanimalo
Famagiana nataon’ny Kaominina Antananarivo
Boriboritany fahadimy : Fiarahana misakafo
Fokontany Ambatovinaky: Vato be ahiana hilatsaka
Fianjeran’ilay vatobe teny Ambanin’Ampahamarinana